Siyanai nezvidhori (1, 2)
Makomborero ekuteerera (3-13)
Kurangirwa kusateerera (14-46)
26 “‘Musazvigadzirira vanamwari vasina zvavanobatsira,+ uye musazvimisira mufananidzo wakavezwa+ kana kuti shongwe dzinoyera, uye musamisa dombo rakavezwa+ munyika yenyu kuti murikotamire;+ nekuti ndini Jehovha Mwari wenyu. 2 Munofanira kuchengeta masabata angu uye kuremekedza* nzvimbo yangu tsvene. Ndini Jehovha. 3 “‘Kana mukaramba muchifamba mumirau yangu, muchichengeta mirayiro yangu nekuitevedzera,+ 4 ndichakunayisirai mvura panguva yayo,+ uye nyika yacho ichabereka zvibereko zvayo,+ uye miti yemusango ichabereka michero yayo. 5 Mwaka wenyu wekupura uchasvika panguva yamunokohwa mazambiringa, uye kukohwa mazambiringa kuchasvika panguva yekudyara mbeu; uye muchadya zvekudya zvenyu muchiguta, mogara munyika yenyu pasina chinokuwanai.+ 6 Ndichaisa rugare munyika yacho,+ uye mucharara pasi pasina munhu anokutyisai;+ uye ndichabvisa zvikara zvinorura munyika yacho, uye bakatwa rehondo harizopfuuri nemunyika yenyu. 7 Muchadzingirira vavengi venyu, uye ivo vachaurayiwa nebakatwa pamberi penyu. 8 Vanhu venyu vashanu vachadzingirira vanhu 100, uye vanhu venyu 100 vachadzingirira 10 000, uye vavengi venyu vachaurayiwa nebakatwa pamberi penyu.+ 9 “‘Ndichakufarirai,* ndoita kuti mubereke, muwande,+ uye ndichachengeta sungano yangu nemi.+ 10 Pamunenge muchiri kudya zvamakakohwa gore rakapera, munenge mava kufanira kubudisa zvitsaru zvacho kuti muwane pekuisa zvitsva. 11 Uye ndichaisa tebhenekeri yangu pakati penyu,+ uye handizokurambai. 12 Ndichafamba pakati penyu, ndova Mwari wenyu,+ uye imi muchavawo vanhu vangu.+ 13 Ndini Jehovha Mwari wenyu, akakubudisai munyika yeIjipiti kuti murege kuramba muri varanda vavo, uye ndakatyora zvikeyi zvejoko renyu, ndikakufambisai makasimudza misoro. 14 “‘Asi kana mukasanditeerera kana kuti mukasachengeta mirayiro iyi yese,+ 15 uye kana mukaramba mirau yangu,+ uye kana mukasema mitongo yangu kuti murege kuchengeta mirayiro yangu yese, motyora sungano yangu,+ 16 iniwo ndichakuitirai zvinotevera: Ndichakurangai nezvinhu zvinotyisa, tiibhii uye fivha, maziso enyu otadza kuona uye muchaperezeka. Muchangodyarira mbeu yenyu pasina, nekuti vavengi venyu vachazvidya.+ 17 Ndichakutarisai ndakatsamwa, uye muchakundwa nevavengi venyu;+ uye vaya vanokuvengai vachakutsika-tsikai,+ uye muchatiza pasina ari kukudzingirirai.+ 18 “‘Kana mukasanditeerera kunyange zvese izvi zvaitika, ndichakurangai zvakapetwa kanomwe nemhaka yezvivi zvenyu. 19 Ndichaputsa kuzvikudza kwenyu ndoita kuti denga renyu rive sesimbi,+ uye nyika yenyu ive semhangura. 20 Muchapedzera simba renyu pasina, sezvo nyika yenyu isingazobereki zvibereko zvayo,+ uye miti yepanyika isingazobereki michero. 21 “‘Asi kana mukaramba muchipikisana neni, muchiramba kunditeerera, ndichakurovai zvakapetwa kanomwe, maererano nezvivi zvenyu. 22 Ndichatuma zvikara zvesango pakati penyu,+ uye zvichakuurayirai vana venyu,+ zvichapedza zvipfuwo zvenyu, uye zvichaita kuti musare mava vashoma, uye migwagwa yenyu ichange isisina anoifamba.+ 23 “‘Kana mukaramba kuti ndikururamisei kunyange izvi zvaitika+ uye mukaramba muchipikisana neni, 24 iniwo ndichabva ndapikisana nemi, uye ini pachangu ndichakurovai zvakapetwa kanomwe nemhaka yezvivi zvenyu. 25 Ndichakuunzirai bakatwa rinokutsivai nekuti munenge matyora sungano.+ Kana mukaungana mumaguta enyu, ndichatuma chirwere pakati penyu,+ uye muchaiswa mumaoko emuvengi.+ 26 Kana ndaparadza pamunoisira* chingwa chenyu,+ vakadzi gumi vachabikira chingwa chenyu muovheni imwe chete, vokugovanisai vachiita zvekuyera+ uye muchadya asi hamuzoguti.+ 27 “‘Kana mukaramba kunditeerera kunyange izvi zvaitika, uye mukaramba muchipikisana neni, 28 ndichatonyanya kupikisana nemi,+ uye ini pachangu ndichakurangai zvakapetwa kanomwe nemhaka yezvivi zvenyu. 29 Saka muchadya nyama yevanakomana venyu, uye muchadya nyama yevanasikana venyu.+ 30 Ndichaparadza nzvimbo dzenyu dzinoyera dzakakwirira,+ ndoputsa zvigadziko zvenyu zvekupisira rusenzi, ndounganidza zvitunha zvenyu pamusoro pezvidhori zvenyu zvisina upenyu zvinosemesa*+ uye ndichatarisa kurutivi ndichikusemai.+ 31 Ndichaita kuti maguta enyu aparadzwe nebakatwa,+ uye ndichaita kuti nzvimbo dzenyu dzinoyera dzive matongo, uye handizonhuhwidzi zvibayiro zvenyu zvinonhuhwirira zvakanaka.* 32 Ini pachangu ndichaita kuti nyika ive dongo,+ uye vavengi venyu vari kugara mairi vachashamiswa pavanoitarisa.+ 33 Uye ndichakuparadzirai pakati pemarudzi,+ ndovhomora bakatwa ndichikudzingirirai;+ nyika yenyu ichava dongo,+ uye maguta enyu achaparadzwa. 34 “‘Panguva iyoyo nyika icharipa masabata ayo mazuva ese ainenge iri dongo, pamunenge muri munyika yevavengi venyu. Panguva iyoyo nyika ichazorora,* sezvo ichifanira kuripa masabata ayo.+ 35 Mazuva ese ainenge iri dongo ichazorora, nekuti haina kuzorora pamasabata enyu pamaigara mairi. 36 “‘Kana vari vaya vanosara vari vapenyu,+ ndichaita kuti vaore mwoyo vari munyika dzevavengi vavo; uye vachatiza vangonzwa shizha riri kupeperetswa, uye vachatiza sezvinoita munhu ari kutiza bakatwa, vodonha pasina ari kuvadzingirira.+ 37 Vachapiringishana sezvinoita vanhu vari kutiza bakatwa, kunyange pasina ari kuvadzingirira. Muchatadza kumirisana nevavengi venyu.+ 38 Muchaparara pakati pemarudzi,+ uye nyika yevavengi venyu ichakuparadzai. 39 Vamwe venyu vanenge vasara vachasiyiwa vachiora vari munyika yevavengi venyu+ nemhaka yekukanganisa kwenyu. Vachaora nemhaka yekukanganisa kwemadzibaba avo.+ 40 Vachabva vazoreurura kukanganisa kwavo,+ voreururazve kukanganisa uye kusatendeka kwemadzibaba avo, vobvuma kuti vakaita zvekusatendeka, nekufamba kwavakaita vachipikisana neni,+ 41 ini ndikabva ndapikisanawo navo+ nekuvaunza kunyika yevavengi vavo.+ “‘Zvichida panguva iyoyo mwoyo yavo isina kuchecheudzwa ichaninipiswa,+ voripa kukanganisa kwavo. 42 Uye ndichayeuka sungano yangu naJakobho,+ nesungano yangu naIsaka,+ uye ndichayeuka sungano yangu naAbrahamu,+ ndoyeuka nyika yacho. 43 Pavakanga vasiya nyika yacho yakangodaro, yairipa masabata ayo+ uye yaiva dongo ivo vasipo, uye vakanga vachiripa kukanganisa kwavo, nekuti vakaramba mitongo yangu, uye vakasema mirau yangu.+ 44 Asi pasinei nezvese izvi, pavari munyika yevavengi vavo, handizovarambi zvachose+ kana kuvarasa zvekusvika pakuvaparadza vese, ndichityora sungano yangu+ navo, nekuti ndini Jehovha Mwari wavo. 45 Ndichafunga nezvavo ndoyeuka sungano yandakaita nemadzitateguru avo+ andakabudisa munyika yeIjipiti mamwe marudzi achizviona,+ kuti ndiratidze kuti ndiri Mwari wavo. Ndini Jehovha.’” 46 Iyi ndiyo mirau, mitongo, nemitemo zvakagadzwa naJehovha pakati pake nevaIsraeri muGomo reSinai achishandisa Mozisi.+
^ ChiHeb., “kutya.”
^ ChiHeb., “Ndichatendeuka, ndokutarisai.”
^ Zvingava zvichireva tumiti twaiisirwa chingwa.
^ Kana kuti “ichachengeta sabata.”